Buddha Puja Celebration – CA USA (7-12 Dec 2010) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Events/Fundraise » Buddha Puja Celebration – CA USA (7-12 Dec 2010)
Buddha Puja Celebration – CA USA (7-12 Dec 2010)
Posted by kai on Nov 3, 2010 in Events/Fundraise |0comments
Buddha Puja Celebration
တရားချစ်ခင်၊တရားနှင့်ပျော်မွေ့ ကြသော ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့————-
သန္တိသစ္စာဝိပဿနာရိပ်သာ၊ စတုတ္ထအကြိမ် မြောက် အသံမစဲ “အဘိဓမ္မာပဋ္ဌာန်း” ဒေသနာတော်ကို၊ မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်သောအား ဖြင့် ဒီဇင်ဘာလ (၇) ရက်၊ အင်္ဂါနေ့ မှ ဒီဇင်ဘာလ (၁၂) ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ အထိ (၅)ရက် ပတ်လုံး သံဃာတော်အရှင်မြတ်များက ပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကြီး ကို နေ့ ညဉ့်မပြတ် အသံမစဲ ရွတ်ဘတ်ပူ ဇော်ကြပါမည်။ ရိုသေစွာဘိတ်ကြားပါသည်ခင်ဗျား။
သန္တိသစ္စာဝိပဿနာရိပ်သာအဖွဲ့ 
We are havingaBuddha Puja Celebration (Tuesday, 12/07/10 to Sunday, 12/12/10) by chanting “Abhidhamma Pathana” chanting continuously day and night for five days at TTVMC. You are cordially invited to participate in this auspicious occasion.
2540 Monroe Street, Riverside, CA 92504